u . iPod iPhone, iPad
Qeybta 1: Radio Service Apple ee: Beats1
Qeybta 2: Beats More idaacadaha laga yaabo in ay ugu dhaqsaha badan soo socda
Qeybta 3: Sida loo dhegayso raadiyaha music Apple online
Apple Music app ama Lugood Music app waa mid ka mid ah ugu danbeeyay oo ugu caansan adeeg geeyo music iyo yimaado qaar ka mid ah muuqaalada cajiib ah oo functionalities. Adeeg music Tani waa madal muhiim u ah caashaqi jiray music jecel dhageysto iyo music ogaadeen oo ka socda qaybaha kala duwan ee dunida. Mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee Apple ayaa music app waa adeeg radio heegan u gaar ah oo loo yaqaan Beats1. By 'reebi galay Beats1, waxaad ka adduunka oo dhan ka heli karaan radio nool iyo garaac galay idaacadaha curated salaysan xiiso leh iyo jeclaanta in music.
Beats1 waa mid ka mid ah idaacadaha ugu fiican oo ah mid ka mid ah oo ay Zane Lowe iyo kooxdiisa Waxaana xaqiiq ah DJ caan abuuraa isku dhafka dhowba ugu fiican iyo music ugu dambeeyay. Waxaa baahiyaa music 24/7 in ka badan 100 dal oo ka istuudiyaha ay oo ku yaal New York, Los Angeles iyo London. Tani waa boosteejo ah oo loogu tala galay barnaamijyada radio horumar iyo wax walba oo ka ciyaara jir hip hop dugsiga si pop higayaa. Waxa xiiso leh oo ku saabsan adeeg waa in song kasta ciyaaray waxaa xaqiiq ah khubarada music. Adeegga Apple Radio noqon kartaa adeeg shakhsiyeed music radio, wax dhib ah maleh meesha aad joogto iyo waxa aad samaynaysid. Samee ugu waxaa ka mid ah.
Wixii ku caashaqi jiray music jecel fikradda ah adeeg music Beats1 Apple ', waxaa jira warar fiican in Apple ugu dhakhsaha badan laga yaabo in bilaabay shan idaacadaha Beats dheeraad ah. Shaki kuma jiro oo ku saabsan xaqiiqada ah in abuurista idaacada Beats1 waa waxa ugu wanaagsan ee ku saabsan Apple app music iyo xaqiiqda ah in shirkadda la soo kuwo cusub uu ka yimaado sida wararka ah, xataa si fiican. Haddii wararka xanta ah tahay in la rumaysto, ka dibna ay magacyadii reer socda 5 idaacadaha cusub uu noqon doono Beats2.com.cn, Beats2.hk, Beats3.sg, Beats4.com.ru iyo Beats5.com.cn. Xitaa saldhigyada kale ee radio laga yaabaa in lagu soo ka dib waa 5 waxaa lagu bilaabay.
Radio Apple Music kuu ogolaanayaa inaad u dhagaystaan ​​Beats 1 oo waa 24/7 xarun raadiye oo dunida oo dhan hore ee Apple. Idaacada waxa loo isticmaali karaa on iPhone, iPad, iPod taabto, Mac ama PC. Ma aha oo kaliya waxa ay ku siinaysaa inaad hesho Beats 1, laakiin sidoo kale on idaacadaha baahida kuwaas oo si gaar ah u curated sida si aad u dhadhan in music. Haddii aad rabtid in aad u dhagaystaan ​​Idaacadda Apple Music online ka dibna aad kala socon kartaa siiyey hoos ku tallaabooyinka.
Talaabada 1: tallaabada ugu horraysa waa in la hubiyo in qalabka macruufka ayaa version macruufka 8.4 ama ka dib. Haddii aan, ka dibna aad marka hore u baahan doontaa si aad u cusboonaysiiso qalab macruufka ah. Sidoo kale, haddii aad leedahay PC ama Mac, markaas waxaad u baahan doontaa si loo hubiyo in aad leedahay Lugood version 12.2 ama ka dib. Waa inaad kaloo haysataa oo sax ah ID Apple in ay sii wadi.
Talaabada 2: in ay u dhagaystaan ​​Idaacadda music Apple oo ku saabsan qalab aad, marka hore waxaad u baahan tahay inay hesho on Music App ah.
Talaabada 3: ka dib, waxaad u baahan tahay inay hesho tab Radio kaas oo la siin doono hoose ee shaashadda. Haddii lagu waydiiyo in aad saxiixdo in, ka dibna aad waa in ay saxiixaan in la ID Apple aad.
Talaabada 4: haddii aad xiisaynayso in ay dhagaystaan ​​Apple Music Radio aad Mac ama PC, markaas waxaad u baahan tahay inaad marka hore u furan Lugood iyo markaas ka bar navigation siiyo on sare ee Lugood, raadiyaha la xusho oo ay. Waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo in aad saxiixdo in la ID Apple si aad u sii wado.
Sidaas oo kale tallaabooyinka kor ku siiyey inaad ku raaxaysan karaan dhagaysto Apple Music Radio online.
> Resource > Music > Apple Music Radio